Eukaryotic zavamiaina bitika dia bitika manana sela manify-mifatotra organelles sy ahitana holatra sy protists, fa zavamananaina-prokaryotic rehetra izay zavamiaina bitika dia bitika-dia conventionally sokajiana ho tsy ampy organelles manify-mifatotra sy ahitana eubacteria sy archaebacteria. Microbiologists fomba nentim-paharazana Niantehitra tamin'ny kolontsaina, staining, ary microscopy. Na izany aza, latsaky ny 1% ny zavamiaina bitika dia bitika eo amin'ny tontolo mahazatra dia mety ho cultured amin'ny fitokana-monina amin'izao fotoana izao dia midika hoe mampiasa.  Microbiologists matetika miantehitra amin'ny molekiola ao amin'ny zavamananaina fitaovana toy ny famantarana ara ADN filaharany, ohatra 16s Gene rRNA filaharany famantarana ampiasaina amin'ny bakteria.
Ny zavamiaina bitika dia ny fianarana ny zavamananaina rehetra izay kely loatra ho hita amin'ny maso mitanjaka. Anisan'izany ny bakteria, archaea, virosy, holatra, prions, prôtôzôera sy ny ahidrano, miaraka fantatra amin'ny anarana hoe 'mikraoba'. Ireo anjara asa manan-danja milalao mikraoba amin'ny nutrient bisikileta, biodegradation / biodeterioration, ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny sakafo spoilage, ny antony sy ny fanaraha-maso ny aretina, sy ny fanafody na. Noho ny javatra iray, mikraoba azo ampiana hiasa amin'ny fomba maro: fanaovana mamonjy aina zava-mahadomelina, ny fanamboarana ny biofuels, manadio ny fandotoana, ary mamokatra / fikarakarana sakafo sy zava-pisotro.
Microbiologists mianatra mikraoba, ary ny sasany amin'ireo zava-dehibe indrindra hitan'ny izay underpinned maoderina fiaraha-monina dia azo avy amin'ny fikarohana ny malaza microbiologists, toy ny Jenner sy ny vaksiny hamely nendra, Fleming sy ny nahitana ny penisilinina, Marshall sy ny famantarana ny rohy eo Helicobacter pylori aretina sy ny kibo fery, dia Zora Hausen, izay fantatra ny rohy eo amin'ny virosy sy ny vozon-tranonjaza papilloma homamiadana.
Ny zavamiaina bitika fikarohana efa, ary mbola ho, ivon'ny fihaonana maro amin'izao fotoana izao sy ny olana eran-hetaheta, foana toy ny sakafo, rano sy hery fiarovana ara-pahasalamana ho an'ny mponina amin'ny tontolo eto an-tany. Fikarohana ny zavamiaina bitika dia manampy mba hamaliana ny fanontaniana lehibe toy ny hoe: 'Ahoana no samihafa ny fiainana eto an-tany?', Ary 'ny fiainana no misy any an-kafa ao amin'ny Izao Rehetra Izao'?
Post fotoana: Dec-04-2018